Abavelisi be-pH / ORP yokuhambisa kunye nabaxhasi - iChina pH / ORP Transmitter Factory
Imitha ye-pH / ORP ye-Intanethi kwi-T4000
Imveliso ye-Intanethi ye-PH / ye-ORP yemitha sisixhobo esilawulayo somgangatho wamanzi kunye nesixhobo sokulawula esine-microprocessor.
Ii-electrode ze-PH okanye ii-electrode ze-ORP zeentlobo ezahlukeneyo zisetyenziswa kakhulu kumzi-mveliso wamandla, kwimveliso ye-petrochemical, kwi-elektroniki yentsimbi, kwimigodi, kwimveliso yamaphepha, kubunjineli bezinto eziphilayo, amayeza, ukutya kunye nesiselo, unyango lwamanzi okusingqongileyo, i-aquaculture, ezolimo zale mihla, njl.
Imitha ye-pH / ORP ye-Intanethi kwi-T6000
Uyilo lwebhulorho yetyuwa ephindwe kabini, ujongano oluphindwe kabini lwe-seepage interface, enganyangekiyo kwi-seepage ephakathi.
Ipharamitha yomngxunya weceramic i-electrode isika ngaphandle kojongano, ekungekho lula ukubhloka.
Uyilo lwebhalbhu yeglasi enamandla amakhulu, ukubonakala kweglasi kunamandla.
Iibhalbhu zokuziva ezinkulu zonyusa amandla okuqonda ii-hydrogen ions, kwaye zisebenza kakuhle kwimeko-bume entsonkothileyo.
Izinto ze-elektrode ze-PP zinokuchasana nefuthe eliphezulu, amandla oomatshini kunye nobulukhuni, ukunganyangeki kwizinyibilikisi zezinto eziphilayo kunye ne-asidi kunye nokubola kwealkali.
Ngamandla okulwa nokuphazamiseka, ukuzinza okuphezulu kunye nomgama omde wokuhambisa. Akukho tyhefu phantsi kobume bemichiza obuntsonkothileyo.
CS2543 ORP woluvo
Yenzelwe umgangatho wamanzi oqhelekileyo.
Uyilo lwebhulorho yetyuwa kabini, isinxibelelanisi seepage sembaleko eziphindiweyo, ukumelana nendawo yokubuyela umva phakathi.
I-ceramic pore parameter electrode iphuma ngaphandle konxibelelwano kwaye akukho lula ukuyivimba, efanelekileyo ukubekwa kweliso kwimithombo yeendaba esemgangathweni esemgangathweni wamanzi.
I-electrode yamkela intambo yengxolo esezantsi, ukuphuma komqondiso kukude kwaye kuzinzile
Iibhalbhu ezinkulu zokuziva zonyusa amandla okuqonda ii-hydrogen ions, kwaye zisebenza kakuhle kwimithombo yeendaba esemgangathweni wamanzi.
CS2700 ORP woluvo
CS2733 ORP woluvo
CS2668 ORP woluvo
Yenzelwe indawo ye-Hydrofluoric acid.
I-electrode yenziwe nge-ultra-bottom impedance-sensitive glass film, kwaye nayo ineempawu zokuphendula ngokukhawuleza, ukulinganisa ngokuchanekileyo, ukuzinza kakuhle, kwaye akulula ukwenza i-hydrolyze kwimeko ye-hydrofluoric acid media media. Inkqubo yesalathiso se-electrode yinkqubo engabonakaliyo, eqinileyo, engatshintshiswanga. Zithintele ngokupheleleyo iingxaki ezahlukeneyo ezibangelwa kukutshintshiselana kunye nokucinywa kwesixokelelwano esingamanzi, njenge-elektrode yesalathiso kulula ukuba ingcoliswe, ireferensi yetyhefu yokuqhekeza, ukulahleka kwesalathiso kunye nezinye iingxaki.
Imitha ye-pH / ORP ye-Intanethi kwi-T6500
Ixabiso le-pH (asidi, i-alkalinity), i-ORP (i-oxidation, ukunciphisa amandla) kunye nexabiso lokushisa kwesisombululo esinamandla sahlala sijongwa kwaye silawulwa.
I-CS1668 yeZindlu zePlastiki ze-pH woluvo
I-CS1768 yeZindlu zePlastiki ze-pH woluvo
I-CS1500 yeZindlu zeGlasi ze-pH woluvo
Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isilumko seChlorophyll, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Ph woluvo Electrode, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo,